Golaha amaanka oo soo dhoweeyey dalabkii xukuumadda koonfurta Sudan – SBC
Golaha amaanka oo soo dhoweeyey dalabkii xukuumadda koonfurta Sudan
Posted by editor on July 14, 2011 Comments
New York:- Golaha amaanka ayaa aqbalay dalabkii xukuumadda cusub ee koonfurta Sudan ee ahaa in ay kamid noqoto dalalka xubnaha ka ah QM.
Wakaaladda wararka AFP oo soo xiganaysa dublumaasiyiin ayaa sheegtay in codeynta la filayo in loo qaado dalabka xukuumadda koonfurta Sudan ay noqon doonto mid la sii qorsheeyey maadaama golaha amaanku uu ogolaaday in albaabada loo furo xukuumada cusub ee koonfurta Sudan si ay u noqoto dalkii 193aad ee ku soo biira QM.
Ogolaanshaha golaha amaanka ayaa ku soo beegmaya shan maamlin kadib ku dhawaaqidda rasmiga dhisitaanka dowlad ka hergasha koonfurta Sudan.
Koonfurta sudan ayaa ku dhawaaqday dowlad madax banaan kadib afti la qaaday bishii Janaayo ee la soo dhaafay markaas oo ay shacabka koonfurta Sudan ay u doorteen si aqlabiyad ah in ay ka madaxbanaanaadaan Jumhuuriyadda Sudan inteeda kale.
Dowladaha mareykanka , China, Russia iyo midowga Yurub ayaa u aqoonsaday koonfurta Sudan dal madax banaan.
Dowladda Jarmalka oo haysa madaxtinimada QM ayaa sheegtay in xukuumadda koonfurta Sudan ay balan qaaday in ay ixtiraamayso ahdaafta iyo mabaadi’da xeerarka QM.
Dhanka kale xoghayaha guud ee QM Baan Kii Muun ayaa sheegay in xukuumadda koonfurta Sudan ay u baahan tahay kaalmooyin maadaama ay tahay xukuumad cusub islamarkaana ay jiraan caqabado hor yaal oo dhan kasta ah gaar ahaan adeegyada bulshada, caafimadka iyo waxbarashada.